China L-Tryptophan CAS 73-22-3 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy Food Grade (FCC / AJI / USP) | Honray
L-Tryptophan CAS 73-22-3 ho an'ny Kilasy Sakafo (FCC / AJI / USP)
Anaran'ny vokatra ：: L-Tryptophan
Ny L-Tryptophan (andrana fohy) dia iray amin'ireo asidra amine ilaina amin'ny olombelona sy ny biby. Saingy tsy afaka ampifangaroina amin'ny vatana.
Toy ny asidra amine hafa, ny L-Tryptophan dia iray amin'ireo fananganana proteinina. Saingy tsy toy ny asidra amine sasany, ny L-Tryptophan dia heverina ho ilaina satria tsy afaka mamokatra ho azy ny vatana. L-Tryptophan dia mitana andraikitra betsaka amin'ny biby na amin'ny olombelona. Fa angamba ny tena zava-dehibe indrindra, io dia lohalaharana ilaina amin'ny neurotransmitter maromaro ao amin'ny ati-doha. Araka izany, L-Tryptophan no hany akora hita matetika amin'ny sakafo azo ovaina ho serotonine. Koa satria ny serotonine dia navadika ho lasa melatonin, ny L-Tryptophan dia mazava ho azy fa manana anjara toerana amin'ny fandanjana ny toe-po sy ny torimaso.
Nampiasaina ho famenon-tsakafo sy antioksida.
1. Ampiasaina amin'ny sakafom-biby hanatsarana ny fihinanana sakafom-biby, hampihena ny fihenan'ny fihenjanana, hanatsara ny fatin'ny biby.
2. Ampiasaina amin'ny sakafom-biby mba hampitomboana ny fiasan'ny foetus sy ny biby tanora.
3. Ampiasaina amin'ny sakafom-biby hanatsarana ny famoahana ny ronono amin'ny ronono.
4. Ampiasaina amin'ny sakafom-biby mba hampihenana ny habetsaky ny proteinina avo lenta ary hitsitsy ny vidin'ny famahanana.
Amin'ny maha-famenon-tsakafo azy, ny L-tryptophan dia ny fananganana infusions asidra amine sy ny fiomanana asidra amino feno miaraka amin'ny asidra amine hafa ilaina.
Ny L-tryptophan dia vita amin'ny fermentation microbial izay ny glucose, ny masirasira, ny ammonium sulfate dia ampiasaina ho akora ary hodiovin'ny filtration membrane, ny fifanakalozana ion, ny kristaly ary ny fanamainana.
Bika Aman 'endrika Kristaly fotsy na vovoka kristaly somary mavo Kristaly fotsy na vovoka kristaly somary mavo -
Assay (amin'ny fototra maina) 98,5% ~ 101.5% 99.0% ~ 100.5% 98,5% ~ 101.5%
Sarobidy PH - 5.4 ~ 6.4 5.5 ~ 7.0
Fanodinana manokana -30.0 ° ~ -33.0 ° -30.0 ° ~ -32.5 ° -29.4 ° ~ -32.8 °
Chloride (as Cl) - ≤0.02% ≤0.05%
Amoniaka (toy ny NH4) - ≤0.02% -
Solifata (toy ny SO4) - ≤0.02% ≤0.03%
Vy (toy ny Fe) - ≤0.002% ≤0.003%
Metaly mavesatra (toy ny Pb) ≤0.002% ≤0.001% ≤0.0015%
Arsenika (toy ny) ≤0.00015% ≤0.0001% -
Asidra amine hafa - mifanaraka -
Fahaverezan'ny maina ≤0.3% ≤0.2% ≤0.3%
Ajanona amin'ny fandrehitra ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1%
Previous: L-Phenylalanine CAS 63-91-2 ho an'ny kilasy sakafo (FCC / USP)
Manaraka: DL-Methionine CAS 59-51-8 ho an'ny sokajy Pharma (USP / EP)
L-Methionine CAS 63-68-3 ho an'ny sokajy sakafo (AJI / USP)
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 ho an'ny kilasy sakafo (FCC / ...
L-valine CAS 72-18-4 Ho an'ny kilasy sakafo (AJI USP)
DL-Methionine CAS 59-51-8 ho an'ny sokajy sakafo (FCC / A ...
Farm kilasy L-Leucine, L-Threonine Pharm, Sakafo biby, 73-32-5 L-Isoleucine, Kilasy Sakafo L-Threonine, L-Valine 72-18-4,